AUMBI: Windows တွင် bootable USB တစ်ခုဖန်တီးရန် open source app ကိုဖွင့်သည် Linux မှ
AUMBI - Windows မှာ bootable USB တစ်ခုဖန်တီးဖို့ open source app တစ်ခု
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ငါတို့ဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံကိုစိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်နဲ့နှစ်သက်ကြသူတွေဖြစ်တယ် Bootable USB၊ စပိန်ဘာသာဖြင့် bootable သို့မဟုတ် initializable ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဒီကိစ္စကိုမသိသောသူများအတွက်ဤသည်မှာရိုးရှင်းပါသည် USB သိုလှောင်ရေးကိရိယာ တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောသူ့ဟာသူအတွင်းသယ်ဆောင် လည်ပတ်မှုစနစ်များသင့်ရဲ့အဘို့, နှစ် ဦး စလုံး run ဖို့ fit တပ်ဆင် မင်္ဂလာပါ အသုံး.
ဤကိရိယာအမျိုးအစားကိုဖန်တီးရန် operating system, များစွာရှိပါသည် ရရှိနိုင်သည့်အပလီကေးရှင်းများ (လျှောက်လွှာများ)သို့သော်ဤကိစ္စတွင်ဤပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကိုတိုက်ရိုက်အာရုံစိုက်ထားသည် အမ်ဘီဘယ်ကဖြစ်ပါတယ် အသစ်က open source app ကို, ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖန်တီးခဲ့သည် Windows ကို.
သို့သော်သတိရသင့်သည်မှာဤအမျိုးအစားအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အပလီကေးရှင်းများဖြစ်သည်။ စက်လည်ပတ်ရေးစနစ် (သို့) bootable ကိရိယာများတစ် ဦး အတွင်း USB drive မည်သည့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆိုအသုံးပြုရန်များစွာရှိသည်။
သူတို့ကိုသိရန်သင်ယခင်ကခေါ်ခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေမှုကိုရယူနိုင်သည် "USB စက်များပေါ်တွင် disc ပုံများကူးယူခြင်းအတွက်မန်နေဂျာများ"ဤအမျိုးအစား၏အသုံးအများဆုံးနှင့်လူသိအများဆုံး Apps များကို Multiplatform နှင့်ရုံအတွက်ဖော်ပြပေးသည် GNU / Linux၊ ၀ င်းဒိုးနဲ့ MacOS.
1 AUMBI - အကြွင်းမဲ့ USB MultiBoot Installer
1.1 AUMBI ဆိုတာဘာလဲ။
AUMBI - အကြွင်းမဲ့ USB MultiBoot Installer
အမ်ဘီ နည်းလမ်း "အကြွင်းမဲ့ USB MultiBoot Installer" ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လို "Absolute Multiboot USB Installer" စပိန်ဘာသာဖြင့် ၎င်းသည်ကူးယူရန်အသုံးပြုသော software ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် operating system မှ ISO ဖိုင် တစ်ဦး USB drive သိုလှောင်မှု။
တ ဦး တည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်စမ်းသပ်ခြင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်, Windows နှင့်အခြားအစပြုကိရိယာများသို့မဟုတ်အသုံးအဆောင်များ။ ထိုအမှု၌ လည်ပတ်မှုစနစ်များ ထည့်သွင်း, သူတို့ကိုနှင့်အတူ configured လာခွင့်ပြုပါတယ် ဇွဲပိုင်ဆိုင်မှုဟုတ်တယ် ထည့်သွင်းထားသောဖိုင်များသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုထိန်းသိမ်းပါ သူတို့ကိုအကြောင်း။
"AUMBI သည်အမျိုးမျိုးသော Operating Systems နှင့်အတူ multi-boot USB ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုထားသော open source utility ဖြစ်သည်။ YUMI ကိုအခြေခံပြီး AUMBI သည်ကုဒ်၏အားသာချက်ကိုရယူရန်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်း၏ယခင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပထမပြောင်းလဲမှုသည် wizard နှင့် boot menu ၏ဘာသာစကားမျိုးစုံစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ 1MB ထက်နည်းသော AUMBI သည်လွယ်ကူစွာသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည့်ပြီးပြည့်စုံသောအသုံး ၀ င်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်".
ကဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက ပွင့်လင်းလမ်းဆုံလမ်းခွYUMI", ၎င်းသည်အခြားအရာများအပြင်ထင်ရှားသည်။
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ စပိန်နှင့်အင်္ဂလိပ်လိုစာရွက်စာတမ်းများ, HTML နှင့် PDF format နှစ်ခုလုံး။
ပိုပြီးများအတွက်ပံ့ပိုးမှု GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် Bootable Tools များ ခေတ်သစ်။
တိုတိုပြောရရင် အမ်ဘီ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Windows တွင် bootable USB တစ်ခုဖန်တီးရန်အရင်းအမြစ်အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ, လုံးဝပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်းကတည်းကပိုမိုလေးစားမှုနှင့်အတူပိုမို updated ခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ် YUMIနှင့်ပိုမိုယုံကြည်မှုနှင့်လုံခြုံရေးနှင့်အတူအသုံးပြုရလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စပိန်ဘာသာစကားနှင့်ပိုမိုအထောက်အကူပြုသည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များ ပိုပြီးခေတ်မီသော။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျငါအကြိမ်အနည်းငယ်သုံးပါ Windows ကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည် YUMIယခုမူကား၊ အမ်ဘီ ငါ၏စာရင်းသို့ Windows တွင်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် application များ.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «AUMBI (Absolute USB MultiBoot Installer)» အရာ၏အသစ်တခုလျှောက်လွှာဖြစ်ပါတယ် «Código Abierto» Windows တွင် Bootable USB တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရရှိနိုင်ပါကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိသည်။ အသုံးဝင်သည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » AUMBI - Windows မှာ bootable USB တစ်ခုဖန်တီးဖို့ open source app တစ်ခု
ဟယ်လို။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲတစ်ခုဖွင့်တဲ့အခါငါမှားယွင်းတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုရလာတယ်၊ အဲဒါကတချို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်dll အမှားများမှတ်တမ်းများပျောက်ဆုံးနေသောကြောင့်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် tutorial များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့သော်လည်းဤအကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်အရာကိုမျှကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Hernan ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ၎င်းသည် GNU / Linux၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဘလော့ဂ်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါသင်၏မေးခွန်းကို Windows အကြောင်းထင်ပါတယ်။ သို့သော်၊ သင့်အမှားပြင်ဆင်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသော libraries (DLL) ၏အမည်ကိုရှာဖွေပြီးသင်၏ Operating System သို့သင်ပေါင်းစည်းနိုင်အောင်မည်သည့် package သို့မဟုတ် patch ရှိကြောင်းကိုရှာဖွေသင့်သည်။
Odoo - ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်လုပ်ငန်းသုံး Web Application Suite
Linspire 8.7 သည်နှေးနှေးသော ၀ င်းဒိုး ၁၀ ကွန်ပျူတာများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်မည်ဟုကတိပြုသည်